Snowflake Na-akọwa Otu Ha Si Gbanwee Ahịa Ha na Azụmaahịa Dabere na Akaụntụ #CONEX | Martech Zone
Anọ m na Toronto na-abịa na Ọgbakọ Ahụmịhe Afọ Uberflip. Taa, anyị na-anọ ụbọchị ahụ na ọmarịcha isi ụlọ ọrụ Uberflip ma na-ege ụfọdụ ndị ọkà okwu ntị. Otu oge nke nwere mmetụta dị ukwuu n'ahụ m bụ Nkwọ Ski ABM Onye isi, Daniel G. Ụbọchị, na-ekwu okwu otu o si mepee mmemme ABM nke mepụtara nsonaazụ ahịa Snowflake.
@uberfliphq nke na-ekpuchi #CONEX na-am ị! Mara mma HQ ebe a na #Toronto #torontotech
A post na-akọrọ site Douglas Karr (@dknewmedia) na Aug 20, 2018 na 2: 26pm PDT
Na mkpokọta, Snowflake enweela uto 10x. Daniel gbara mbọ tinye na nke a abụghị nsonaazụ ahịa ọ bụla, mana ọ nwere mmetụta dị egwu. Daniel kwukwara na ọdịiche dị n'etiti ụlọ akwụkwọ ochie na-eche maka ịre ahịa na ABM niile dị na ha ikike ịba ụba jiri ntakịrị akụrụngwa yana iji teknụzụ arụ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ tozuru oke site na ilekwasị anya na ntanetị, na-etinye firmographics iji zube ụdị ụdị azụmaahịa ụfọdụ, na-enye ugbu a na ahụmịhe ọdịnaya otu na otu iji dọta akaụntụ ndị ezubere iche.
Usoro ABM nke Snowflake na-ebunye:
Target - tinye n'ọrụ Onyeka Onwenu na Bọmbọ, Snowflake na-adịghị aka-ahọpụta iche ụlọ ọrụ… ọ na-chọpụtara ulo oru nke dakọtara ha kacha mma ahịa na egosipụtala ebumnuche ịzụta.
iru - tinye n'ọrụ Nkwụsị, Sigstr, na LinkedIn, Snowflake na-achịkọta ahụmịhe ọdịnaya ahaziri iche nke na-emetụ ndị na-achọ ịzụ ahịa tupu ha amata ihe ngwọta ha. N'ezie, Daniel kwuru na ha nwere otu onye ahịa nke nwere 450 metụrụ tupu ahịa mgbe osụk arịrịọ!
-arụ - tinye n'ọrụ Uberflip, Snowflake nwere ahụmịhe ọdịnaya ndị bụ nwere site na njikwa akaụntụ ahịa, mana nke ndị otu ABM mepụtara iji nye ọdịnaya dị oke mkpa iji mee ka onye zụrụ ya banye na njem ndị ahịa.
Tụọ - tinye n'ọrụ Aglọ ọrụ, table, na Anya, Daniel mepụtara ụzọ dị iche iche nke isi na-eduga ma na-enye ọgụgụ isi ahịa dị mkpa maka ndị njikwa akaụntụ ahịa iji nyere ha aka imechi azụmahịa ahụ.
Nsonaazụ ya mara mma. Pịa-site na ọnụego mnweta 149X na 1: 1 ABM mgbasa ozi. Ọbụghị naanị nke ahụ, ọkara nke ọdịnaya niile na Snowflake na-emepụta na-erichapụ ndị òtù ABM ezubere iche.
Otu igodo nke Daniel kwughachiri ugboro ugboro bụ na mmekọrịta dị n'etiti ahịa na ahịa dị oke egwu. Teknụzụ enyerela Daniel aka mee ka usoro ntinye ihe dị na ọdịnaya ezubere iche, mana ndị otu ya ka ga-arụ ọrụ na ohere kachasị mma.
Nke ahụ na-achọ ahịa iji nye nzaghachi yana iji nye ọgụgụ isi nri. Ndi otu Daniel nyere oru ka ha weputa ohere inweta ahia, ha adighi achoputa ihe omuma nke MQL (Azụmaahịa Azụmaahịa).
Chei, nke ahụ bụ ụbọchị nzukọ tupu nzukọ! Enweghị ike ichere maka echi.
Tags: abmahia dabere na ahịabọmbụakwụkwọ oziUgboro abụọLinkedInonye nlerekeonweKpooSnowflaketableahaziri ọdịnaya ahụmahụezubere ichenjedebeuberflip